Karazam-Braking amin'ny Electric Skateboards - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Na izany na tsy herinaratra fiara, dia misy maro karazana braking- Kilonga mavitrika, friction, ary regenerative braking. Izy rehetra samy hafa mampiasa fomba lasa miadana kokoa ny fiara teo.
Friction freins no mitovy karazana freins izay ampiasaina amin'ny fiara mahazatra. Amin'ny ankapobeny, friction manohitra ny novakiny kapila no ampiasaina mba hiova kinetic angovo (ny hetsika ny fiara) ho hafanana, izay slows ny fiara teo. Ny lalana bisikileta tsy tapaka ihany koa ny mampiasa friction tokony hampihenana ny amin'ny clamping ny novakiny pad manohitra ny sisiny anatiny ny bisikileta ny kodia.
Electric skateboards ankapobeny dia tsy mampiasa friction freins satria mila fitaovana izay mibahan-toerana Manao milina avy.
Outrunner brushless motors- ny fahita indrindra karazana maotera ampiasaina amin'ny herinaratra indrindra skateboards-dia napetraka ny maharitra avoakan'ireo andriamby, manodidina ny fototry ny tariby varahina ratra ao amin'ny faribolana ka rehefa noroahina herinaratra dia amin'ny alalan'ny tariby, dia miteraka ny sahan'andriamby izay manosika amin'ny ny napetraka ny maharitra Andriamby, ka nahatonga ny hanodinana ny maotera. Ny mihorongorona tariby manao electromagnet. Ny zavatra mangatsiatsiaka momba ny avoakan'ireo andriamby, dia ny nifanohitra afaka occur- raha ny andriamby peratra hanodinana ny manodidina ny tariby varahina, dia mampiditra herinaratra ao an-tariby. Izany no fototra lehibe indrindra ao ambadiky sady mavitrika sy regenerative rafitra novakiny, ary ahoana no gropy hiteraka herinaratra.
Dynamic braking dia matetika rafitra ampiasain'ny locomotives fiarandalamby. Eto amin'ity tontolo ity, ny kinetic angovo Niova fo ho hafanana amin'ny alalan'ny famindrana ny herinaratra niteraka ny kofehy Motors ho resistor, izay avy eo hiparitahan'ilay ny angovo toy ny hafanana. Rehefa avoakan'ireo andriamby, ao amin'ny maotera hitarika ny amin'izao fotoana izao eo amin'ny tariby varahina, dia niteraka fanoherana, lasa miadana kokoa ny maotera kofehy.
Hatramin'ny androany, dia misy iray izay mampiasa herinaratra skateboard mavitrika braking izay mitohy amin'ireo regenerative braking.
Skateboards herinaratra voalohany indrindra mampiasa ny rafitra antsoina hoe "regenerative braking". Izany dia mitovy amin'ny mavitrika braking, afa-tsy raha tokony ho Redirecting ny herinaratra ho resistor mba nisinda ny angovo toy ny hafanana, dia niova indray ny bateria, mampatanjaka azy.
Ny olana voalohany indrindra amin'ny regenerative ny rafitra dia hoe rehefa misy bateria dia feno, dia tsy afaka manaiky intsony amin'izao fotoana izao tsy overloading sy handringana ny bateria. Noho izany, izay ihany no zana-kazo mampiasa regenerative braking dia tena very fahafahana notapahiny rehetra araka ny bateria Hits 100% anjara-raharaha.
Zana-kazo toy ny Koowheel Board na Nampiroborobo Board dia bip taloha kelin'ny ny freins Hetezo, fa izany no tsy ampy matetika ny mahatonga ny kely saina mpitaingina mba hamoahana ny eny amin'ny birao. Izany no antony zava-dehibe ny mahay foana tongotra namaky isaky ny hafainganam-pandeha no mitaingina ny herinaratra amin'ny skateboard. Ny tombontsoa lehibe amin'ny Drive dia mahafinaritra fanaon'ilay vorona fa mampiasa na regenerative sy mavitrika braking- indray mandeha ny bateria dia feno (ary raha ny freins-janakazo dia hetezo tanteraka), dia Switches ny mavitrika braking sy mbola mamela anao moramora.
Post fotoana: Dec-14-2017